Booliska Faransiiska, ayaa wuxuu shaaciyay in la soo gaba gabeeyay hawlgalkii saakay ka socday xaafadda Saint Denis Ee Waqooyiga Magaalada Paris. – STAR FM SOMALIA
Booliska Faransiiska, ayaa wuxuu shaaciyay in la soo gaba gabeeyay hawlgalkii saakay ka socday xaafadda Saint Denis Ee Waqooyiga Magaalada Paris.
Booliska Faransiiska, ayaa wuxuu goor dhow uu shaaciyay in la soo gaba gabeeyay hawlgalkii saakay ka socday xaafadda Saint Denis Ee Waqooyiga Magaalada Paris.
Xoogaga ammaanka, ayaa weeraray dhisme ku yaala Saint Denis, iyadoo uu soo galay tuhun ah in uu ku sugan yahay mid ka mid ah ragga la aaminsan yahay in ay ka dambeeyeen weeraradii Magaalada Paris, Jimcihii.
Haweeney laga shakiyay oo xirneyd jaakadda ka sameysan walxaha qarxa, ayaa is qarxisay, xilli Boolisku ay isku deyayeen in ay gacanta ku dhigaan, iyadoo nool. Boolisku waxay sheegeen in qaraxaasi uu ku dhintay mid ka mid ah eeyda u tababaran hawlgalada.
Nin lala xiriirinaayo kooxdii ku sugneyd dhismaha la weeraray, ayaa toogasho lagu dilay. Waxaa kaloo jira illaa toddobo qof oo laga shakisan yahay oo la xiray.
Booliska, ayaa Twitter-ka ku sheegay in shan ka mid ah Ciidanka Booliska ay ku dhaawacmeen waxa loogu yeeray hawlgalka ka dhan ah argagaxisada.
Booliska, ayaa baadi-goob ugu jira Abdelhamid Abaaoud oo u asalkiisu yahay Moroccan, sidoo kalana haysta dhalashada dalka Belgium, mana suurtagelin in gacanta lagu soo dhigo. Abaaoud oo lagu eedeeyay in uu yahay maskaxdii ka dambeysay weeraradii Paris, ayaa waxaa kol hore soo baxay warar sheegaaya in uu ku sugan yahay dalka Suuriya, inkastoo ay dib ka soo baxeen warar intaasi shaki gelinaaya.
Goobaha waxbarashada ee ku yaala Saint Denis, ayaa la xiray, waxaana muwaadiniinta lagu wargeliyay inaanay guryahoodu ka soo bixi karin, illaa amar dambe.
Dadka deegaanka, ayaa Warbaahinta u sheegay intii uu hawlgalku socday in ay maqleen qaraxyo iyo rasaas xoogan, rasaasta ayaa ahayd mid laba dhinac ka dhaceysay.
Xoogaga sida gaarka ah u tababaran ee loogu yeero Elite police, ayaa ka soo muuqday hawlgalkii maanta, iyagoona gacanta ku dhigay illaa toddobo nin oo argagaxisnimo loo haysto.
labo nin oo u dhashay dalalka Norway iyo Shiinaha, kuwaasoo ay afduub u heysteen IS ayey toogteen
Laba ka mid ah Saraakiisha Booliska Sacuudiga oo maanta la dilay